Lomotil vs. Imodium: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao - Fanabeazana Ara-Pahasalamana | Desambra 2021
Orinasa Fahasalamana Fialam-Boly Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao News Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Community, Company Zava-Mahadomelina Vs. Namana Vaovao, Wellness Orinasa, The Checkout Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Lalao Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana
Tena >> Fanabeazana Ara-Pahasalamana >> Lomotil vs. Imodium: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Lomotil vs. Imodium: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Lomotil (diphenoxylate / atropine) sy Imodium (loperamide) dia fanafody antidiarrheal roa izay ampiasaina hitsaboana ny maranitra sy fivalanana maharitra . Ireo fanafody ireo dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny fampihenana ny isan'ny sy ny hafanan'ny tsinay. Lomotil sy Imodium dia natao hoentina amin'ny fivalanan'ny fotoana fohy, izay matetika dia mivaha ao anatin'ny andro vitsivitsy aorian'ny fihinanana fanafody.
Amin'ny tranga maro, ny fivalanana, na dia fanandramana tsy mahafinaritra aza, dia matetika no malefaka ary mandeha irery. Ny fitsaboana voalohany ny fivalanana dia ny fanoloana ny tsiranoka sy electrolytes hisorohana ny tsy fahampiana rano. Na izany aza, ny fanafody toy ny Lomotil sy Imodium dia mety mahasoa amin'ny fivalanana mahery vaika ary koa ny fivalanana maharitra mifandraika amin'ny fivontosan'ny tsinay (IBS).
Na eo aza ny fitovian'ny fampiasana azy ireo, i Lomotil sy i Imodium dia misy tsy fitoviana tokony ho adino. Ohatra, ireo fanafody ireo dia misy akora samihafa ary misy fetrany. Hizaha eto ny fahasamihafana sy ny fitovizany eto.
Inona avy ireo fahasamihafana lehibe misy eo amin'i Lomotil sy Imodium?
Lomotil dia zava-mahadomelina marika izay tsy azo raha tsy amin'ny alàlan'ny fanafody. Izy io dia misy fitambaran'ny diphenoxylate (opioid) sy atropine (fanafody anticholinergic).
Diphenoxylate no singa voalohany mifatotra amin'ny mpandray opioid ao anaty tsinay mba hampiadana ny fivezivezin'ny tsinay. Atropine dia ampiana hanakiviana ny fanararaotana zava-mahadomelina satria diphenoxylate dia fanafody voafehy irery.
Imodium, namboarina ihany koa ho Imodium A-D, no marika amin'ny loperamide. Tsy toy ny Lomotil, ny Imodium dia azo vidiana amin'ny latabatra (OTC). Noho izany, misy betsaka kokoa io.
Loperamide dia opioid synthetic izay mifamatotra amin'ny mpandray opioid ao amin'ny rindrin'ny tsinay mba hampiadana ny fihetsiky ny tsinay. Izy io koa dia manakana ny simika antsoina hoe acetylcholine ary mitarika fihenan'ny fihenan'ny fluid sy electrolyte. Satria Imodium dia manana fitrohana kely ao amin'ny rafi-pitabatabana afovoany (CNS), dia mamokatra vokadratsin'ny CNS vitsy izay mahazatra amin'ny opioid hafa, ao anatin'izany ny diphenoxylate.
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny Lomotil sy Imodium
Kilasy zava-mahadomelina Antidiarrheal Antidiarrheal
Iza no anarana mahazatra? Diphenoxylate / Atropine Loperamide
Vahaolana anaty rano Takelaka am-bava
Inona ny fatra mahazatra? Aretim-pivalanana mahery vaika:
Takelaka 2 (diphenoxylate 2,5 mg / atropine 0,025 mg) inefatra isan'andro mandra-pahatongan'ny fanaraha-maso ny fivalanana voalohany.
Ahenao ny fatra voalohany amin'ny fatra fikojakojana (matetika takelaka 2 isan'andro) araka ny torolalan'ny dokotera. Ajanony raha tsy mihatsara ny soritr'aretina ao anatin'ny 10 andro. Aretim-pivalanana mahery vaika:
4 mg voalohany, ary avy eo 2 mg isaky ny seza malalaka. Fatra fatra isan'andro: 16 mg
Mampiasà fatra fikojakojana 4 ka hatramin'ny 8 mg isan'andro. Ajanony raha tsy mihatsara ny soritr'aretina ao anatin'ny 10 andro.
Mandra-pahoviana ny fitsaboana mahazatra? Fivalanana vetivety izay mivaha ao anatin'ny 10 andro. Ny fampiasana maharitra dia mety ilaina amin'ny fivalanana maharitra. Fivalanana vetivety izay mivaha ao anatin'ny 10 andro. Ny fampiasana maharitra dia mety ilaina amin'ny fivalanana maharitra.
Iza matetika no mampiasa ny fanafody? Ny lehibe sy ny ankizy 13 taona no ho miakatra. Ny lehibe sy ny ankizy 2 taona no ho miakatra. Ny zaza latsaky ny 6 taona dia tokony hifampidinika amin'ny dokotera alohan'ny hisotroana ranoka Imodium.
Te hanana ny vidiny tsara indrindra amin'ny Lomotil?
Misorata anarana amin'ny fampandrenesana ny vidin'ny Lomotil ary fantaro rehefa miova ny vidiny!
Toe-javatra tsaboin'i Lomotil sy Imodium
Lomotil dia ankatoavin'ny FDA ho toy ny fitsaboana fanampiny amin'ny fivalanana. Midika izany fa ny Lomotil dia atolotra ho fitsaboana fanampiny miaraka amin'ny fomba fitsaboana voalohany toy ny fisorohana ny tsy fahampiana rano.
Toa an'i Lomotil, Imodium dia eken'ny FDA hitsaboana karazana fivalanana maro. Imodium dia azo ampiasaina hitsaboana Fivalanana mpivahiny ary koa ny fivalanana vokatry ny fanafody toy ny fitsaboana ara-simika. Lomotil sy Imodium koa dia afaka mitsabo ny fivalanana maharitra ateraky ny fivontosan'ny tsinay (IBS).
Ny fivalanana dia matetika faritana ho toy ny fivalanana seza intelo na mihoatra ao anatin'ny iray andro. Matetika dia mivalana ny fivalanana mahery vaika ary matetika tsy maharitra mihoatra ny iray na roa andro. Ny fanapoizinana ara-tsakafo dia antony iray mahatonga ny fivalanana mahery vaika.
Aretim-pivalanana mafy kokoa ary mety haharitra efa-bolana mahery indray mandeha. Ny soritr'aretin'ny fivalanana dia afaka mandeha irery na maharitra ela kokoa, izay mety mitaky fitsaboana amin'ny fanafody.
toe-javatra Lomotil Imodium
Aretim-pivalanana ENY ENY
Fivalanana mpivahiny ENY ENY
Fivalanana mifandraika amin'ny simioterapy ENY ENY
Mahomby kokoa ve i Lomotil na i Imodium?
Lomotil sy Imodium no mpitsabo antidiarrheal be mpampiasa indrindra. Samy mandaitra izy ireo ary miasa haingana mba hanamaivanana ny soritr'aretin'ny fivalananana. Ny zava-mahadomelina tsara indrindra ho anao dia miankina amin'ny toe-pahasalamanao ankapobeny, izay tokony hozahan'ny mpitsabonao.
Voalaza fa ny Imodium dia mety ho fanafody mahomby kokoa. Na dia tsy misy fitsapana ara-pitsaboana mampitaha mivantana ny Lomotil sy Imodium aza, ny fanadihadiana sasany dia manondro fa ny Imodium dia safidy tsara kokoa amin'ny fitsaboana fivalanana. Jamba roa sosona, fandalinana crossover nahita fa ny loperamide dia ambony noho ny diphenoxylate amin'ny fitsaboana ny fivalanana na dia amin'ny doka ambany 2.5 heny aza.
hafa fandalinana crossover ampitahaina amin'ny loperamide, diphenoxylate, ary codeine amin'ny fitsaboana ny fivalanana maharitra. Talohan'ny fitsaboana, 95% ny mpandray anjara dia niaina maika satria ny famantarana ny fivalanana. Ny fandinihana dia nahitana fa ny loperamide sy ny codeine dia mandaitra kokoa noho ny diphenoxylate ho an'ny fanamaivanana. Diphenoxylate dia hita fa manana ny vokany betsaka indrindra raha ny loperamide kosa dia hita fa manana ny kely indrindra.
Fampitahana sy fampitahana ny vidin'ny Lomotil vs. Imodium
Ny ankamaroan'ny Medicare Fizarana D sy ny drafitra fiantohana dia tsy mandrakotra ny marika Lomotil. Na izany aza, drafitra fiantohana maro no manarona ny kinovan'ny zava-mahadomelina. Ny drafitra Medicare Fizarana D dia tokony handrakotra ny diphenoxylate / atropine arakaraka ny fandrakofanao. Ny vidin'ny antsinjarany Lomotil mahazatra dia manodidina ny $ 38. Zahao amin'ny farmasinao raha afaka mampiasa karatra fitehirizana fihenam-bidy ianao. Ny coupon SingleCare Lomotil dia afaka mampihena ny vidiny ka mandoa $ 12 ianao.
Imodium dia fanafody OTC izay mety tsy hosaronan'ny drafitra Medicare sy fiantohana. Ny drafitra sasany dia mety handrakotra ny endrika mahazatra amin'ny alàlan'ny fametahana. Ny tsara indrindra dia ny mijery ny formulary an'ny drafitry ny fiantohana hahazoana antoka. Ny vidin'ny loperamide dia manodidina ny 26 $. Miaraka amin'ny fihenam-bidy SingleCare, afaka mahazo takelaka loperamide mahazatra ianao amin'ny $ 14 eo ho eo. Raha te hanararaotra ny tahiry OTC dia mbola mila mahazo a ianao fanafody avy amin'ny dokoteranao .
Matetika rakotry ny Medicare? tsy tsy
Fatra mahazatra 2,5 mg diphenoxylate / 0,025 mg atropine, takelaka 30 takelaka 2 mg, habetsahan'ny takelaka 30
Copie Medicare mahazatra $ 0– $ 150 $ 0– $ 99
Sarany SingleCare $ 12 $ 14
Ny voka-dratsin'ny Lomotil vs. Imodium
Ny voka-dratsy ateraky ny Lomotil dia misy ny fahantrana, fanina ary fisaleboleboana. Raha ampitahaina amin'ny Imodium, Lomotil dia mety hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny CNS ao anatin'izany ny aretin'andoha, tsy fitoniana ary fikorontanana.
Ny vokatra mahazatra indrindra mifandraika amin'ny Imodium dia fitohanana . Ny voka-dratsy hafa mahazatra dia ny fanina, fisalebolebo ary kibo na ny kibo.
Amin'ny doka avo kokoa, ny voka-dratsy ateraky ny Lomotil sy ny Imodium dia mety hahitana ny fahantrana, ny fitambarana ary ny fahalainana. Ny voka-dratsy ateraky ny fisefoana (fahakiviana) dia mety hitranga amin'ny fatra misy poizina.
fitohanana tsy - ENY 5,3%
fanina ENY * tsy notaterina ENY 1,4%
maloiloy ENY * ENY 1,8%
Kibo kibo ENY * ENY 1,4%
Mandroa ENY * ENY *
Vava maina ENY * ENY *
rendremana ENY * ENY *
Aretin'an-doha ENY * tsy -
be fisalasalana toy ENY * tsy -
fifanjevoana ENY * tsy -
Mety tsy lisitra feno amin'ny vokatra ratsy mety hitranga izany. Miangavy anao hijery dokotera na mpitsabo anao raha te hahalala bebe kokoa.
Loharano: DailyMed ( Lomotil ), DailyMed ( Imodium )
Fifandraisana zava-mahadomelina an'ny Lomotil vs. Imodium
Ny Lomotil dia afaka mifampiraharaha amin'ny zava-mahadomelina toy ny monoamine oxidase inhibitors (MAOI) sy ny depressants CNS. Ny fandraisana MAOI, toy ny selegiline na phenelzine, miaraka amin'i Lomotil dia mety hampitombo ny mety hisian'ny krizy hypertensive, na ny tosidra ambony mampidi-doza. Ny risika amin'ny voka-dratsy dia mety hitombo ihany koa rehefa mihinana fanafody mahakivy CNS toy ny barbiturates, benzodiazepines, ary relant hozatra .
Tsy toy ny Lomotil, ny Imodium dia voahodina betsaka kokoa ao amin'ny atiny amin'ny alàlan'ny anzima toy ny anzima CYP3A4 sy ny anzika CYP2C8. Ny zava-mahadomelina manakana, na manakana, ireo anzima ireo dia afaka mampitombo ny haavon'ny Imodium amin'ny rà. Vokatr'izany, ny fandraisana ireo zava-mahadomelina ireo dia mety hampitombo ny mety ho voka-dratsy.
RONGONY Kilasy zava-mahadomelina Lomotil Imodium
Tranylcypromine Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) ENY tsy
Oxycodone CNS ketraka ENY ENY
Itraconazole Mpanakana CYP3A4 tsy ENY
Gemfibrozil Mpanakana CYP2C8 tsy ENY
Ritonavir Mpanakana P-glycoprotein tsy ENY
Tsy lisitra feno amin'ny fifanakalozana zava-mahadomelina izany. Azafady mba manatona ny dokotera alohan'ny itondranao ireo fanafody ireo.
Fampitandremana amin'ny Lomotil sy Imodium
Ny Lomotil dia tsy tokony hampiasaina amin'ny ankizy latsaky ny 6 taona noho ny fitomboan'ny risika amin'ny famotsoran-keloka sy ny fahaketrahana CNS. Ireo izay manana jaundice manelingelina na hypersensitivity fantatry ny diphenoxylate na atropine dia tokony hialana amin'ny fampiasana Lomotil ihany koa.
Imodium no voalaza fa nahatonga izany Torsades de Pointes , fisamborana aretim-po, ary fahafatesana rehefa alaina mihoatra ny fatra natoro. Ampirisihina ianao mba tsy handray fatra farafahakeliny takiana araka ny toromarika avy amin'ny mpitsabo anao. Ny imodium dia tsy tokony hampiasaina amin'ny zazakely sy ny zaza latsaky ny 2 taona noho ny risika amin'ny fihenan'ny taovam-pisefoana sy ny CNS.
Ny Lomotil sy ny Imodium dia tsy tokony ampiasaina hitsaboana fivalanana vokatry ny aretina mikraoba. Ireo zava-mahadomelina ireo dia tsy tokony ampiasaina hitsaboana fivalanana vokatry ny zavamananaina toy ny Clostridium difficile SY Salmonella .
Manontania dokotera raha manana aretina ianao alohan'ny handraisana ireo fanafody ireo. Ampirisihina ianao handray ireo fanafody ireo amin'ny torohevitra ara-pahasalamana avy amin'ny mpitsabo anao.
Fanontaniana napetraka matetika momba ny Lomotil vs. Imodium
Inona ny Lomotil?
Lomotil dia fanafody famoahana fanafody ampiasaina ho fitsaboana amin'ny fivalanana. Lomotil dia azo alaina amin'ny marika sy ny kinova mahazatra. Azo alaina amin'ny fivalanan'ny fivontosan'ny Matsilo na maharitra amin'ny olon-dehibe sy ankizy izay 13 taona no ho miakatra.
Inona ny Imodium?
Imodium dia fanafody over-the-counter (OTC) izay ankatoavin'ny FDA hitsaboana fivalanana. Ny Imodium dia matetika ampiasaina hitsaboana ny fivalanan'ny mpivahiny na dia afaka mitsabo ny fivalanana lava aza vokatry ny IBS. Imodium dia afaka mitsabo ny olon-dehibe sy ny ankizy izay 2 taona no ho miakatra.
Mitovy ve ny Lomotil sy ny Imodium?
No. Lomotil sy Imodium dia tsy mitovy. Na dia miasa amin'ny fomba mitovy aza izy ireo, dia tsy azo alaina amin'ny alàlan'ny fanafody fotsiny ny Lomotil. Imodium dia azo vidiana amin'ny latabatra.
Tsara kokoa ve i Lomotil na i Imodium?
Lomotil sy Imodium dia samy fanafody mahomby hitsaboana fivalanana. SASANY Research dia naneho fa tsy misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fahombiazan'ny roa tonta. Na izany aza, hafa fampianarana naneho fa Imodium dia mandaitra kokoa ary mandefitra kokoa. Manantona ny dokoteranao amin'ny safidy fitsaboana tsara indrindra mety aminao.
Afaka mampiasa Lomotil na Imodium ve aho rehefa bevohoka?
Ny dokotera sasany dia mety mamela ny fampiasana Lomotil na Imodium mandritra ny fitondrana vohoka raha tsy ilaina izany. Raha tsy izany, ny Lomotil sy ny Imodium dia matetika tsy atolotra mandritra ny fitondrana vohoka noho ny mety hanimba ny foetus. Miresaha amin'ny dokoteranao momba ny safidy antidiarrheal mandritra ny fitondrana vohoka.
Azoko atao ve ny mampiasa Lomotil na Imodium amin'ny alikaola?
Tsy tokony hatao ny misotro toaka raha mampiasa Lomotil na Imodium. Ny Lomotil sy ny Imodium dia mety miteraka voka-dratsy toy ny fahantrana sy fanina. Ny fisotroana alikaola dia mety hampitombo ireo voka-dratsy ireo.
Fa maninona no voarara ny Lomotil?
Lomotil dia tsy zava-mahadomelina voarara. Na izany aza, dia fandaharam-potoana V fanafody voafehy araka ny fanasokajian'ny DEA. Midika izany fa mety hisy ny fampiasana tsy ara-dalàna sy fanararaotana rehefa mampiasa an'io fanafody io. Izy irery ihany, diphenoxylate, singa mavitrika lehibe an'ny Lomotil, dia singa iray ao amin'ny Jadual II izay mety hitrangan'ny fanararaotana.
Azonao atao ve ny maharitra maharitra Lomotil?
Lomotil dia tsy tokony hampiasaina mihoatra ny 10 andro ho an'ny fivalanana mahery vaika. Amin'ny tranga sasany, ny Lomotil dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana maharitra, indrindra ho an'ny fivalanana maharitra. Ny fampiasana Lomotil maharitra dia tokony harahin'ny dokotera.
Inona no mitranga raha tsy manakana ny fivalanana i Imodium?
Ny Imodium dia tokony hanamaivana ny soritr'aretin'ny fivalanana maivana ao anatin'ny 48 ora. Raha mahatsapa ny iray amin'ireto ianao dia tokony hiantso ny dokotera eo noho eo:
Ra ao amin'ny fipetrahana
Fanaviana na mari-pana mihoatra ny 101.3 ° F
Marary kibo mafy
Mandalo seza malalaka enina na mihoatra isan'andro
Aretim-pivalanana maharitra maharitra 48 ora
Fambara toy ny hazavana mavesatra, fikorontanana, fanaintainan'ny tratra, na tsy fahasalamana
Tylenol ve NSAID?
Inona no atao hoe allergy amin'ny masoandro? Mianara momba ny tsy fetezan'ny photosensitivity
inona ny soritr'aretin'ny aretim-po
inona daholo no mahasoa ny vinaingitra paoma?
manala tena amin'ny fitsapana zava-mahadomelina
vinaingitra no paoma cider hamono fantsika holatra
tsy afaka mijanona mikohaka rehefa mandry aho
inona ireo famantarana diabeta voalohany?
salan'isa salan'ny fanaraha-maso ny zaza tsy misy fiantohana